Moderaterna: ''Waa in la joojiyaa turjubaanka dadka loo qabanayo!'' - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ulf Kristersson, gudoomiyaha Moderaterna. Foto: Hansjörg Kissel/Sveriges Radio
Moderaterna: ''Waa in la joojiyaa turjubaanka dadka loo qabanayo!''
Publicerat måndag 1 juli 2019 kl 12.22
Waxaa shalay oo ahayd axad 30-ka juun jasiiradda Gotland ka bilowday kulanka todobaadka siyaasadda ee Almedalen
Siyaasiga koowaad ee hadlay wuxuu ahaa Per Bolund oo ah hogaamiyaha xisbiga degaanka ee Miljöpartiet, kaasoo weerar culus ku qaaday isticmaalka xad dhaafka ah ee dadka Swedish-ka.
Wuxuu dhaliilay dadka Sweden oo uu ku tilmaamay bulshada wax ’’gadata misna xoorta’’ isagoo aad diiradda u saaray dhanka dharka oo uu sheegay in loo baahan yahay in tillaabo laga qaado si wax looga qabto waxyeellada uu isticmaalka xad-dhaafka ihi ku leeyahay cilimada iyo degaanka.
- Celcelis ahaan, dhar cusub ayaan soo iibsannaa todobaad kasta, misna 81% dadka Swedish-ka ihi waxay dhahaan ma haysanno wax aan xiranno. Xaqiiqaduse waxay tahay in 3-dii qofba midkood uu kuu sheegayo inuusan xiri karin albaabka armaajada dharka, ayuu yiri Bolund.
Maanta 1-da Luulyo, waxaa tookada leh xisbiga Moderatorerna. Ulf Kristersson oo ah guddoonka xisbigaasi ayaa soo jeediyay in la laban-laabo ciqaabta iyo la socodka dadka gaysta dembiyada abaabulan, si loo dhimo dembiyada la xiriira gaangiska.
Wuxuu tixraacayay toogasho fiidnimadii Axaddii ka dhacday agagaarka Stockholm, Ulf Kristersson ayaa haddaba la waydiiyay waxa arrintaa uga diyaarsan iyaga ka xisbi ahaan.
- Waa in lagu soo rogaa ciqaab laba-laaban, tan kale haddii muddo dheer la xiro, way ku adkaanaysaa inay dhallinyaro cusub duufsadaan, taasoo muhim iyaga u ah, ayuu yiri Kristersson.
Dhanka kale wuxuu Kristersson keenay hindise ay xisbigoodu wadaan oo ku aaddan inaan qofka loo qabanin tarjumaan afkiisa hooyo ah, gaar ahaan haddii uu qofku haysto rukhsadda abadiga ah ee loo yaqaanno Uppehållstillstånd ee lagu deganaado dalka Sweden, isagoo arrintaa u sababeeynaya inay dib u dhigayso inuu qofku bulshada dhexgalo iyo in uu barto afka Swedish-ka intaba.
- Waxaan qabaa in duruufaha mudada fog keeni kara isdhex-gal sidii hore dhaama, uu ku xiran yahay qofka oo ku hadli kara af Swedish-ka. Ma diiddani dhiiri gelinta luuqadda qofka iyo xitaa tarjubaanka, balse haddii aad Sweden timaado waa inaad barataa af Swedish-ka, ayuu yiri Kristersson.